कहिले बन्छन् घर ?::Online News Portal from State No. 4
कहिले बन्छन् घर ?
जनता आवास कार्यक्रम प्रभावित
बागलुङ, २७ वैशाख – समयमा बजेट नपाएपछि एक बर्षअघि निर्माण शुरु भएको जनता आबास कार्यक्रम प्रभावित भएको छ । सिमान्तकृत र बिपन्न घरपरिवारले सरकारी अनुदानमा निर्माण गर्न लागेको घरहरु अलपत्र परेपछि निराश भएका छन् । गलकोट नगरपालिका ७ मल्मका जयराम दर्जीले पहिलो किस्ता पाएर घर बनाउन थाले पनि पछि बजेट नपाएपछि बर्षातमा घर भत्कने खतरा बढेको गुनासो गरे । उनको घरको झ्यालढोका राखेको ४ महिना भैसक्यो । त्यसपछिको काम गर्न पैसा नभएपछि अलपत्र छ । दर्जीको परिवार पनि मजदुरी गरेरै खानुपर्ने बाध्यतामा छन् । डिभिजन शहरी बिकास तथा भवन कार्यालयमार्फत आउने अनुदान रकमबाट उनीहरुको घर बनाउने कार्यक्रम थियो ।
आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा उनीहरुको घर सकिनुपर्ने हो । समयमा बजेट नआएकोले सूचिकृत भएर पनि चालु बर्षका लागि कार्यक्रम सरेको थियो । यो बर्ष पनि पहिलो किस्ता रकम आएपछि बजेट सकिएको डिभिजन प्रमुख सचिन्द्रकुमार देवले बताए ।
यस्तै पिडा बागलुङ नगरपालिका ४ की माया किसानले पनि भोगेकी छिन् । उनको पनि बर्षातमा घर भत्कने खतरा बढेको छ । दोश्रो र तेस्रो किस्ता नपाएपछि उनले घर ठड्याउन नसकेको गुनासो गरिन् । दैैनिक ज्याला मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले छोराछोरी पाल्ने गरेको उनले बताईन् । उनी अहिले पनि छिमेकीहरुको छाप्रोमा भाडा तिरेर बस्छिन् ।
बागलुङमा १ सय ९ वटा घर बनाइसक्ने चालु बर्षको योजनामा अधिकांस घर अलपत्र छन् । सुकुम्बासी, जग्गा भएर पनि दलीत, अल्पसंख्यक र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरु यो कार्यक्रममा छनौट भएका थिए । डिभिजनमार्फत चालु बर्ष बागलुङमा १ सय ९, म्याग्दीमा १ सय र मुस्ताङमा ५० गरी २ सय ५९ घर बनाउने योजना थियो । अलपत्र रहेको काम पुरा गर्न १० करोड बजेट आवस्यक पर्ने ईन्जिनियर तेजेन्द्र पौडेलले बताए । ‘कम्तिमा २ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मात्र पाएपनि बनेका घरमा जस्तापाता लगाएर छाउन सकिन्थ्यो, नत्र बर्षातमा अधिकांस घर भत्कन्छन्’ पौडेलले भने, ‘एकदुई जनाले ऋण खोजेर भएपनि जस्तापाता लगाएका छन् ।’ तोकिएको मापदण्ड पुरा गर्दा रंगीत जस्तापाता प्रयोग गर्ने भन्ने प्रावधान छ । ऋण खोजेर छाएकाहरुले सादा जस्तापाता प्रयोग गरेका छन् ।
प्रदेश सभामा निर्वाचित सदस्य जिल्ला जनता आवास कार्यक्रमको अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । यो प्रावधान अनुसार बागलुङका ईन्द्रलाल सापकोटाले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । प्रदेश सभा र मन्त्रालयमा पटक पटक यो बिषय उठाएपनि बजेट पाउन नसकेको उनले गुनासो गरे । ‘केन्द्रीय अर्थमन्त्रालयले बजेट नदिएकोले यहाँबाट केही काम हुन सकेको छैन’ सापकोटाले भने, ‘दैनिक दर्जनौं फोन आउन थालेको छ, लाभग्राहीलाई न्याए दिन सकिएन ।’ डिभिजनमा दैनिक एक जनालाई फोन उठाउने काममा खटाउनु परेको पौडेलले बताए । बजेट अभावमा केही छुटेकाहरुलाई सम्झौता गराउन समेत बोलाउन नसकेको उनले बताए । कार्यक्रमअन्र्तगत २ कोठे घर निर्माणका लागि ३ किस्तामा ३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ दिने प्रावधान छ । घरको जग राख्नका लागि ८३ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ, दोश्रो किस्ता १ लाख, तेस्रोमा १ लाख १६ हजार र चौथो किस्ता ३० हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ दिने प्रावधान छ । घर बनाउन पाइन्छ भनेर कतिपयले बसेको छाप्रो समेत भत्काएको पौडेलले बताए ।
भाडामा बसेका बागलुङ नगरपालिका ४ का रत्नबहादुर चर्माकारले ऋण खोजेर जस्ता लगाएको बताए । ‘पानी छेकेको छु, तर ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ’ चर्माकारले भने, ‘मजदुरी गरेर ल्याएको पैसाले दुइ छाक खानै ठिक हुन्छ ।’ चर्माकार दम्पत्ति र दुइ छोरा मेलापात गएर जीवन चलाएका छन् । डिभिजनले पटक पटक प्रदेश र संघिय तहका मन्त्रालयहरुमा पत्राचार गरेको देवले बताए । संघिय सरकारको सशर्त बजेटमार्फत प्रदेशले बिनियोजन गरेर आवास बनाउने सरकारी नीति अनुसार काम थालिएका थिए । गत आर्थिक बर्ष भने डिभिजनले जिल्लाको बडिगाड गाउँपालिका २ का १५ घर कुमाल बस्ती छनौट गरेर घर बनाएको थियो । उनीहरुको भने घर बनेकोले ढुक्कले बस्न पाएका छन् ।